A NA-EJI CRACKDOWNS KAMA AKWỤKWỌ RUSSIAN NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Dozie nsogbu na ngosipụta nke mkpụrụ akwụkwọ Russian na Windows 10
Netwọk mmekọrịta dị mma VKontakte jupụtara n'ọtụtụ ọdịnaya. Akwụkwọ ndị mmadụ na ndị otu na-akwalite ntụrụndụ ntụrụndụ na-adọrọ mmasị na mgbasa ozi, na-enweta ọtụtụ iri nde echiche kwa ụbọchị. Ma ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị hụrụ ọkwa dị egwu ma ọ bụ na-adọrọ mmasị n'ihu ọha, mana ndị enyi gị ahụbeghị ya?
Karịsịa maka mgbasa ozi, VC bịara na usoro ntọala - na ntinye ole na ole, onye ọrụ ọ bụla nwere ike ịkọrọ ndị enyi ya na ndị debanyere aha ya na mgbidi ya, n'ìgwè ya, ma ọ bụ zipu ozi ziri ezi nye onye ahọrọ. N'otu oge ahụ, ederede ederede, foto, vidiyo na egwu dị na ndekọ, e gosipụtara isi mmalite nke mbipụta ahụ.
Esi eme ka ịdegharịa ihe ndekọ, vidiyo, ihe ndekọ ma ọ bụ foto
Ị nwere ike ịkekọrịta ọ bụla ọdịnaya site na ebe ọ bụla, ma e wezụga maka ìgwè mechiri emechi. Ọ bụrụ na izigara otu enyi na abanyeghị na ndị a mechiri emechi, mgbe ahụ, kama ntinye, ọ ga-ahụ ọkwa maka enweghị ikike nnweta. Ịkwesighi iji mmemme pụrụ iche, ị dị mkpa ka ị banye n'ime vk.com.
Kedu otu esi eketa ozi site na mgbidi
Ikekọrịta ntinye site na mgbidi nke otu, ọha ma ọ bụ enyi, ịkwesịrị pịa akara ngosi pụrụ iche n'okpuru akwụkwọ ahụ n'onwe ya. Ọ dị ka obere ọnụ na-esote na bọtịnụ. "Mmasị". Pịa na akara ngosi a ozugbo.
Mgbe ịpịrị, obere windo ga-emeghe, nke ga-emeghe ohere iji rụọ arụ ọrụ. Ị nwere ike izipu ndekọ ahụ na ndị nnata atọ:
ndị enyi na ụmụazụ - a ga-eziga ntinye na mgbidi na ibe gị. Na ntọala kwesịrị ekwesị, ndị enyi a na ndị debanyere aha ga-ahụkwa na ndepụta ozi;
ndị debanyere aha obodo - ihe ndekọ ahụ ga-apụta na mgbidi nke ọha ma ọ bụ mmadụ ma ọ bụ otu ebe ị bụ onye nchịkwa ma ọ bụ nwee ikike zuru ezu iji bipụta na mgbidi;
zipu ozi nzuzo - na ndepụta ndetu-a ga-egosipụta ndị ọrụ dị na ndị enyi gị. Ọ bụrụ na ị nwere mkparịta ụka n'onwe gị, mgbe ị banyere aha gị na nyocha ọchụchọ ahụ, ịnwere ike ịchekwaa post a n'onwe gị na mkparịta ụka.
Ị nwere ike ịgbakwunye ozi ederede nke gị na ndekọ ederede, yana ịdebe foto ọ bụla, ndekọ ọdịyo, vidiyo ma ọ bụ akwụkwọ.
Ntọala nke abụọ na windo ahụ na-enye gị ohere ịkekọrịta ndekọ site na mbupụ ya dị ka:
njikọ kpọmkwem na ndekọ ahụ;
repost na Twitter ma ọ bụ Facebook
ọkọlọtọ na ebe nrụọrụ weebụ gị (site n'itinye koodu pụrụ iche)
Otu esi ekerita ndekọ ihe
Ọ bụrụ na ịchọghị izipu ozi niile na nhọrọ nke egwu na foto, mgbe ahụ, ọ ga-ekwe omume izipu kpọmkwem otu ndekọ ederede. Maka nke a, ịchọrọ:
Malite na-egwu ya site na ịpị akara ngosi kwekọrọ na akara aha. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ige ntị na ihe ndekọ ahụ, ị ​​nwere ike ịkwụsị ya ozugbo.
N'etiti etiti isi ụlọ ahụ, pịa otu ugboro na aha egwu ahụ anyị gụrụ.
Mgbe ịpịsịrị, windo nwere ihu ọma zuru ezu ga-apụta na anyị ga-ahụ ndepụta nke ihe ndekọ nke si na nke a na ihe ndị ọzọ na ọrụ ọrụ ọkpụkpọ a ma ama. N'elu aka nri ị nwere ike ịhụ akara ngosi a kọwapụtara nke repost - obere mpi, nke ịchọrọ ịpị ozugbo.
Na obere obere igbe, ị nwere ike ibido nsụgharị nke egwu a ozugbo na ọkwa nke ibe gị na ngalaba ndị a na-ahazi, naanị site na ịlele igbe dị n'akụkụ aha.
A ga-ekwuru na mgbe ị nyochachara igbe dị na ibe gị ma ọ bụ n'òtù ndị a họpụtara, mgbe niile na ọnọdụ a ga-egosipụta egwu ọ bụla ị na-ege. Iji gbanyụọ ike maka ndị ọzọ ịhụ egwu egwu egwu, ị ga-achọ ịchọta ihe ndị ahọrọ.
Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ na windo adaala n'elu "Zigara enyi"mgbe ahụ, anyị ga-ahụ window windo, nke yiri nke ahụ na-egosi mgbe ị na-ezipụ ndekọ na mgbidi. Ihe dị iche bụ na ị pụghị itinye foto ma ọ bụ akwụkwọ na ozi ahụ, ma ị nweghị ike mbupụ ndekọ ọdịyo gaa na enyemaka ndị ọzọ.
Kedu otu esi kenye foto
Iji gosi mmadụ otu foto, ịkwesịrị imeghe ya, ma ozugbo n'okpuru ya, pịa bọtịnụ òkè. Mgbe ahụ ịkwesịrị ịhọrọ onye nnata. Onye ọrụ ahụ ga-enweta foto a na ozi nzuzo ya, a ga-ebipụta ya na mgbidi nke ibe gị ma ọ bụ ọha na eze.
Esi kenye vidiyo
Yiri nke foto a - ibu ụzọ mepee vidiyo site na ịpị aha (dị n'okpuru nlele), ma na window meghere pịa bọtịnụ ahụ Kwuo (ọ dị n'okpuru videotape).
Ị nwere ike ịkekọrịta na ndị enyi gị na ndị debanyere aha ihe ọ bụla ọdịnaya site na iziga ya na ozi nzuzo ma ọ bụ site na ịde ya na mgbidi nke aka gị ma ọ bụ ọha na-elekọta. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere mkparịta ụka n'onwe gị, ị nwere ike ichekwa ndekọ ọ bụla, oyiyi, egwu ma ọ bụ vidiyo. Naanị ihe nwere ike ịkwụsị onye nnata na ịlele ozi ezigara ya bụ enweghi ikike ịnweta ohere.